9-ka kulan ee ugu wanaagsan shayga qarsoon ee loogu talagalay Android | Androidsis
Aaron Rivas | 06/04/2021 16:00 | Aaladaha Android, Ciyaaraha Android
Marar badan waxaan isku aragnaa waqtiyo sugitaan oo umuuqda kuwo aan dhamaanayn, waana daqiiqadahaas markii aan leenahay ciyaaro jahwareer ah oo naga dhigaysa inaan waqti si dhakhso leh u dilno. Tan darteed ma jirto hab ka fiican oo lagu sameeyo wax ka badan tan cayaaro shay qarsoon, waana taas sababta aan kuugu keenayno isku-dubbaridkan, oo aad ka heli doontid cayaaraha ugu fiican qaybtaas ee loogu talagalay Android, kuwa aad kula baashaalo karto oo aad naftaada ku madadaalin karto.
Markaa waan ku soo qori doonaa ciyaaraha shayga ugu fiican ee qarsoon ee hadda laga heli karo Google Play Store. Dhammaantood waa bilaash oo waxay leeyihiin caan caan ah iyo soo degsasho badan.
1 Sirta Qarsoon: Raadi Waxyaabaha Qarsoon
2 Socdaalkii Juun - Sirta iyo Waxyaabaha Qarsoon
3 Magaalada Qarsoon: Waxyaabaha Qarsoon ee Qarsoon
4 Sherlock: Kiisaska Qarsoon
5 Bulshada Qarsoon - Bulshada Qarsoon
6 Waxyaabaha Qarsoon: Qarsoodiga Xeebta Hill
7 Ogeysiisyada Codsadeyaasha: Qarsoodiga Qarsoon
8 Waxyeellada 'Pearl' ee Khatarta - Ciyaar Walxaha Qarsoon
9 Waxyaabaha Qarsoon ee Nadiifinta Guryaha - Ciyaaraha Maskaxda
Sirta Qarsoon: Raadi Waxyaabaha Qarsoon
Waxaan ku bilaabaynaa liiskan mid ka mid ah cayaaraha ugu soo dagsan ee ku jira qaybtiisa: Mystery Manor. Cinwaankani wuxuu leeyahay wax ka badan 10 milyan oo soo degsasho ah iyo 4.6 xiddigood oo qiimeyn ah oo ku yaal Play Store kaasoo ku saleysan in ka badan 480 kun oo ra'yi iyo faallooyin ah, kuwaas oo inta badan aad u wanaagsan oo ammaanaya, oo aan waxba ka jirin.
Dulucda ciyaartan ayaa ka kooban ogaado waxyaalaha qarsoon ee ku yaal Tuulada Qarsoodiga ah, oo ah meesha male-awaalka ah ee wax walba ka dhacaan, isla waqtigaas oo ay tahay inaan helno oo aan ogaanno walxaha aan dhammaadka lahayn ee ku qarsoon geesaha aan laga filayn.
Tani ma aha oo kaliya ciyaar ay tahay inaad ka hesho walxaha oo aad xalliso waxyaalaha qarsoon, laakiin sidoo kale waa mid ay ku jirto waxaad tijaabin doontaa xirfadaada iyo dhaqsida maskaxdaada. Waxa kale oo ku jira dad badan, cirfiidyo, iyo xayawaanno siiya ciyaarta mawduuc murugo iyo murugo leh.
Noqo baare leh Sirta Sirta oo aad xalliso xujooyinka, xujooyinka iyo wax kasta oo jidkaaga ku soo dhaca, adoo ku raaxeysanaya sawir gacmeedyo si fiican loo farsameeyay oo soo jiidasho leh iyo dhawaaj aan la qiyaasi karin. Tan kale waa taas shaqeeyaa bilaa internet, sidaa darteed waad ku ciyaari kartaa wakhti kasta iyo meel kasta.
Developer: Cayaaraha Ciyaarta
Socdaalkii Juun - Sirta iyo Waxyaabaha Qarsoon
Ciyaar kale oo weyn oo ka socota qaybta xujooyinka, xiisaha iyo walxaha qarsoon. Socdaalkii Juun wuxuu na qaadanayaa waqti ku saleysan 20-meeyadii oo leh muuqaallo caadi ah oo xilligaas ah iyo walxaha qarsoon meel kasta.
Wax walba waxay ku wareegaan sirta qoyska taasoo siinaysa jawi dahsoon oo xiiso leh baaritaanka ay tahay inaan ku dhaqaaqno xalinta dhibaatooyinka iyo helitaanka walxaha ay tahay inaan helno.
Socdaalkii Juunyo dhammaad ma leh xiisaha. Waxaa jira xujooyin, dhibaatooyin iyo waxyaabo badan oo lagu xallin karo waqti kasta, oo leh heerar aan la koobi karin iyo halxidhaalayaal tijaabin doona awoodda, xawaaraha iyo awoodda maskaxeed ee ciyaartoy kasta. Taasi waa sababta, shaki la'aan, waa ciyaar kale oo weyn oo lagu helo waxyaabo qarsoon.
Safarkii Juun - Alaabo Raadi
Magaalada Qarsoon: Waxyaabaha Qarsoon ee Qarsoon
Naqshadeynta ciyaarta ayaa muhiim u ah in la bixiyo khibrad aan nooceeda aheyn, waana tan waxa qarsoon ee Magaalada ay ku faanto, kulan shay kale oo qarsoon oo weyn oo diyaar u ah Android.
Aad ayey u adag tahay in si dhakhso leh loo dhammeeyo dhammaan heerarka kulankaan, maxaa yeelay Waxay leedahay in ka badan 70 xaaladood oo ay ka buuxaan waxyaabo qarsoon oo aad u adag in la helo. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay wax ka badan 6.500 oo hawlgallo ah oo ay tahay inaad dhammaystirto si aad u hesho abaalmarinno.
Waxa kale oo ay leedahay in ka badan 1.000 hawlgal oo la sameeyo, 74 astaamo xiiso leh oo ka dhex muuqan doona horumarka ciyaarta iyo dhammaystirka baadhitaannada, 15 jilayaal bahalnimo ah oo aad ka heli karto magacyada yaryar ee la heli karo iyo inbadan. Waa adduunyo had iyo goor ay jiraan waxyaabo badan oo la sameeyo. Taasi waa sababta ay u tahay mid ka mid ah kuwa ugu fiican la joogista, xitaa asxaabta, taas oo ka dhigaysa mid xiiso leh.
Developer: Madadaalada G5
Sherlock: Kiisaska Qarsoon
Haddii aadan kaliya dooneynin inaad gasho adduunka baaritaanka sheyga qarsoon iyo raadinta, laakiin sidoo kale aad rabto inaad dareento mid ka mid ah baarayaasha ugu caansan taariikhda, sida Sherlock Holmes uu ahaa, kani waa ciyaar adiga kugu habboon.
Kulankaan waa inaadan kaliya helin boqolaal shey oo ku qarsoon duruufo kaladuwan oo leh dhibaatooyin kaladuwanWaxay sidoo kale la socotaa ciyaaro yar-yar oo ay tahay inaad la jaanqaado taayirrada, sahamiso adduunyada, iyo inaad ku sii marto sheeko xiiso leh.
Dhacdooyinka waxay ku saleysan yihiin adduunyo suugaaneed oo buugaagtu badanaa yihiin halyeeyada. Waxaa jira deegaanno ay walxaha qarsoon loo jiheeyo si ay u noqoto caqabad maskaxeed si dhakhso leh loo helo, iyo inbadan iyo in ka badanba, markii hawlihii la dhammaystiray, dhibku sii kordhayo, taas oo ciyaartan ka dhigaysa mid aad u xiiso badan. waayi karaa saacado iyo saacado.
Sidoo kale ku hel shakhsiyaad badan oo taariikhi ah Sherlock: Kiisaska Qarsoon sida Dr. Watson ee caanka ah.
Bulshada Qarsoon - Bulshada Qarsoon
Ciyaartan shay ee qarsoon waa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan uguna xiisaha badan ee nooceeda ah. Dhexdeeda waa inaad ku biirtaa amar qarsoodi ah oo qarsoodi ah, si aad u hesho halka uu ku sugan yahay Richard, adeerkaa ciyaarta, maaddaama dabeecaddan si lama filaan ah loo waayey. Intaas waxaa sii dheer, waa inaad ilaalisaa amniga dadka aqoonta leh, isla waqtigaas oo ay tahay inaad ku dhex marto adduunyo kala duwan si aad u horumariso oo aad u gaarto ujeeddooyinka.
Waxaa jira in ka badan 7.600 oo hawlgal oo la sameeyo oo aan la joojin mashquulkaaga, ku dhowaad 100 meelood si loo ogaado, jilayaal fara badan oo aad ogaan doonto intaad ciyaarta ku sii socoto, minigames badan oo diyaar u ah inay kaa dhigaan inaad ku raaxeysato waqti madadaalo iyo in ka badan 1.200 ururinta walxaha qarsoon si aad u hesho.
In ka badan 5 milyan oo soo degsasho ah, ku dhowaad 900 kun oo faallooyin iyo qiimeynno ah, iyo dhibcaha ugu dambeeya ee 4.4 xiddigood ee Google Play Store, waxaa iska cad in ciyaartan ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu fiican nooceeda, iyo sidoo kale mid ka mid ah kuwa ugu madaddaalada badan sidoo kale.
Waxyaabaha Qarsoon: Qarsoodiga Xeebta Hill
Haddii aad rabto inaad siiso caqabado xiisa leh iyo dhibaato horumar leh, Waxyaabaha Qarsoon: Xeebta Xeebta ee Hill Mystery ayaa adiga kuu ah beddel kale oo weyn. Waana in cinwaankani uu bixinayo heerar kala duwan oo ay tahay inaad ka hesho walxaha ku qarsoon meelaha adag.
Laakiin intaas oo keliya ma aha. Abuur avatar aad ku aqoonsan doonto ciyaarta isla markaana aad ku cusboonaysiiso guri da 'weyn, intaad ku dhex marayso afartan xaaladood oo raadinta iyo xallinta xujooyinka iyo halxiraalaha badan ee ay tahay in lagu sameeyo 9 qaabab kala duwan. Waxa kale oo jirta sheeko leh waxyaalo qarsoon oo xiise leh oo aad ku daahfuri doonto tillaabo kasta iyo horumarka aad ku dhaqaaqdo markaad xallinayso dhibaatooyinka hortaada la soo dhigay.
Developer: AdoreStudio Xaddidan
Ogeysiisyada Codsadeyaasha: Qarsoodiga Qarsoon
Ka gudubka xoogaa meelo macquul ah oo ku saleysan waqtiyadii hore, waxaan ka helnaa Qoraallo Codsade: qarsoodi qarsoodi ah, ciyaar adiga kuu geyn tuulo cajiib ah oo inkaaran oo ay ka buuxaan boqolaal shey oo qarsoon oo ay tahay inaad ka hesho safarkaaga, oo leh sawiro soo jiidasho leh iyo astaamo badan oo soo muuqan doona inta aad ciyaarta ku dhex socoto.
Waajibaadkaagu waa inaad jebiso habaarka tuulada, sida aad ugubooneysid tacabir xiisaha xiisaha leh iyo sheeko aad uqurux badan oo lama filaan ah oo kugu hakin doonta ciyaarta. Waana in cinwaankan loo malaynayo in la bixinayo in ka badan 9.300 ergooyinka diyaar u ah inay qabtaan, taas oo aad saacado ku qaadan doontid inaad xalliso, sidaas darteed waxay u adeegtaa jimicsi maskaxeed oo loogu talagalay dhaqdhaqaaq, xirfad iyo xawaare.
Waxa kale oo jira hees aad u fiican oo kaa qaban doonta daqiiqadda ugu horreysa iyo ciyaaro xujo badan oo, haddii aad xalliso, kugu abaalmarin doona waxyaabo aad hadhow adeegsan karto.
Waxyeellada 'Pearl' ee Khatarta - Ciyaar Walxaha Qarsoon
Dhibaatada 'Pearl's Peril' waxay ina geynaysaa da 'dahabi ah oo ah 30-ka kaas oo dhagarta ismiidaamintu ay udub dhexaad u tahay ayna ka dhacdo gobollo badan, taas oo ay tahay inaad ku safarto adduunka si aad u hesho jawaabaha la tilmaamay oo, sidaas darteed, caddee waxa dhacay.
Waxay leedahay xaalado runtii cajiib ah, kuwaas oo lagu sawiray gacanta oo soo bandhigaya tayo farshaxan aad u saraysa, iyo jilayaal badan oo si fiican kaaga caawin doona jidka qarsoodiga ah. Eeg meelaha sida New York City, Paris, iyo qaaradaha sida Afrika, kuwaas oo ah halka dhagarta laga soo saaray waana inaad heshaa boqolaal shey oo qarsoon oo aan sahlaneyn in la helo. Saacado iyo saacado ku qaad kulankaan illaa aad ka xalinayso qarsoodiga weyn. Waa, shaki la'aan, ciyaar kale oo weyn oo ka tirsan qaybteeda, sidaa darteed, waxaan ku liis garaynay isku soo ururintan.
Waxyaabaha Qarsoon ee Nadiifinta Guryaha - Ciyaaraha Maskaxda
Ciyaartaan markasta waxaad kaheleysaa meelkasta oo guriga ah. Halkan, intaad nadiifinaysid oo aad nadiifineyso, waa inaad ka heshaa boqolaal shey oo qarsoon oo si wanaagsan ugu qarsoon dhammaan geesoodka qolalka. Waana nadiifinta guriga waligeed sidan oo kale madadaalo ma leh, oo leh heerar sii kordheysa oo dhib badan leh iyo xaalado tiro badan oo aad marwalba hawlo ku qabato.
Guriga ciyaartu waxay qarinaysaa waxyaabo badan oo sir ah, sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaad la kulanto waxyaabo dhif ah oo aadan waligaa maleyn karin ka hor inay ku hoos jiraan roogga ama gadaasha gabal alaab. Taa baddalkeeda, cinwaankan waxaa lagu heli karaa luqado badan, oo dabcan ay ku jiraan Isbaanish, marka lagu daro Ingiriisiga. Waa mid aad u waxbarasho iyo ikhtiyaar u fiican carruurta inay caado ka dhigtaan inay guriga amraan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » 9-ka kulan ee ugu fiican shayga qarsoon ee Android
My trovas la ludojn interestj kaj bonaj recenzoj
Sida loo rakibo shahaadada dhijitaalka ah taleefanka Android